Bitcoin ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် Cryptocurrency လက်ခံခြင်း
Bitcoin နှင့်အခြား cryptocurrencies ယနေ့အကြောင်းအရာများယိပူဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ဤမျှလောက်သတင်းအချက်အလက်ကြောင့် Bitcoin ရှုပ်ထွေးပုံရသည် အသုံးပြု. ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းဝန်းကျင်မျောနေသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ Bitcoin သုံးစွဲဖို့အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ရုံရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်ကဲ့သို့သင်သည်တီဗီမှာအသုံးပြုနိုင်တော့မည်နိုင်ရန်အတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကို၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှနားလည်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သငျသညျ Bitcoin ရှိတစ်ပြိုင်နက်, သင်သည်အစဉ်အလာအားဖွငျ့ကဝင်ရောက်ဖို့လိုပေမည်။ ပြီးနောက်အားလုံးမဟုတ်လူတိုင်းနှင့်အထူးသဖြင့်မရတိုင်း ဘဏ် Bitcoin လက်ခံ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင် privacy ကိုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအမည်မဖော်လိုတဲ့အဆင့်ကိုအာမခံဖို့လိုပေမည်။ ဒီအောင်မြင်ရန်, များစွာသောလူ cryptocurrency ရှာသို့မဟုတ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် Bitcoin။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဆဲလ်ဖုန်းအပေါ် app တစ်ခုထဲကနေဖယ်သူတို့ရဲ့ E-ငွေကြေးသိုလှောင်ဖို့နေရာလိုခငျြ; ငွေသားသို့ပြောင်းနှင့်အခွင့်ကောင်းယူပြီးအားဖြင့်ပြည်ပမှာကရပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နေရာတစ်နေရာ ကမ်းလွန်ဘဏ်.
ရေတိုအဖြေဘို့, သင်သည်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖုန်းနံပါတ်များကိုသို့မဟုတ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံအသုံးချဖို့ကအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတူစကားလက်ဆုံရှိနိုင်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ Bitcoin နှင့်အခြား cryptocurrency အမျိုးမျိုးနိုင်သောကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။ ဤအတောအတွင်းပိုပြီးအသေးစိတ်ထပ်မံဖတ်ပါ။
ပထမဦးစွာ Bitcoin ကဘာလဲ? Bitcoin 2009 အတွက်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်မည်သူမဆိုဖို့လက်ငင်းငွေပေးချေစေအသုံးပြုသူများအတွက်နိုင်ပါတယ်။ Bitcoin ဗဟိုစည်းမျဉ်းမပါဘဲလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ အဲဒီအစား, Bitcoin peer-to-peer နည်းပညာကိုအသုံးပြုပါတယ်။ အဆိုပါ Bitcoin ကွန်ယက်ကိုစုပေါင်းအရောင်းအငွေထုတ်ပေးရေး၏စီမံခန့်ခွဲမှုအထဲကသယ်ဆောင်။ Satoshi Nakamoto မူလက Bitcoin တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အမည်အစပြုရာတွင်အသုံးပြုသည့် alias ကိုယုံကြည်ပါတယ်။ အများပြည်သူ Bitcoin ဖွံ့ဖြိုးပြီးသူသို့မဟုတ်လူများ၏အမှန်တကယ်နာမကိုသိမထားဘူး။ Bitcoin ပိုင်းတွင်တစ်ဦး MIT ကလိုင်စင်အောက်မှာဖြန့်ချိခဲ့သည်။
Bitcoin သမားရိုးကျငွေကြေးကဲ့သို့တူညီသောဖက်ရှင်အတွက်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ရောင်းဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူများရုံငွေသားနှင့်အကြွေးကဒ်များတူသောပီဇာ, အမေဇုံလက်ဆောင်ကတ်များနှင့်အခြားသာမန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ Bitcoin ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ, တကဒက်ဘစ်ကဒ် အသုံးပြု. မှ Bitcoin နှိုင်းယှဉ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဘဏ်အကောင့်ပိုင်ရှင်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါသူတို့ကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရယူသုံးနေကြသည်။ ဤရွေ့ကား, ဘဏ်အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းပေးပို့နှင့်လက်ခံရရှိရန်အွန်လိုင်းစနစ်အားကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤရွေ့ကားဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းစက္ကူငွေကြေးထုတ်ယူနိုင်ပါသည်သောငွေကြေးတန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အလားတူ Bitcoin နှင့်အတူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Bitcoin အမေရိကန်ဒေါ်လာ, ယူရို, ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးမဆိုနဲ့အခြားပုံစံများအတွက်ဖလှယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအစကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဘဏ်များနှင့်အတူမတူဘဲ, သို့သော်, Bitcoin သုံးပြီးလုပ်အရောင်းအဘယ်သူမျှမ middleman နှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။ ထို့အပြင် Bitcoin နှင့်ဆက်စပ်ခြင်းမရှိငွေပေးငွေယူအခကြေးငွေရှိပါတယ်။ Bitcoin ကိုလည်းအဘယ်သူမျှမထုတ်ဖော်လိုအပ်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ပို. ပို. ကုန်သည် Bitcoin နှင့် cryptocurrency ၏အခြားပုံစံများကိုလကျခံဖို့အစနေကြသည်။ Bitcoin တစ်ခုတည်းသောအွန်လိုင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည်မဟုတ်။ Ethereum, Litecoin နှင့်အခြားသူများလည်းရှိပါတယ်။ Bitcoin အရှိဆုံးလူသိများနှင့်ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Bitcoin ကိုစတင်သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းစမတ်ဖုန်းသုံးပါနှင့်သုံးစွဲသူများကိုဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုသို့မဟုတ် Bitcoin အတွက်ပေးဆောင်ရသည့် app ကို download လုပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား app များကိုလေ့ Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ လူကြိုက်အများဆုံး app ကို Coinbase ဟုခေါ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် app ကိုတစ်ဦးဘဏ်အကောင့်သို့မဟုတ်ဒက်ဘစ်ကဒ်ချိတ်ဆက် app ကိုအပေါ်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာရပေမည်။ သူမြားကိုဘဏ်၏အွန်လိုင်း username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်တဲ့ဘဏ်အကောင့်အရေအတွက်ကချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ တဦးတည်းမှသုံးကာလ၏သင်တန်းကျော်လုပ်သေးငယ်တဲ့သိုက်အတည်ပြုကိုလည်းလင့်ထားသည်နိုင်ပါတယ်။
Bitcoin ခွင် blockchain အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်။ အဆိုပါ blockchainashared အများပြည်သူလယ်ဂျာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုလုံးကို Bitcoin ကွန်ရက် blockchain ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အားလုံးအတည်ပြုခဲ့သည်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအဆိုပါလယ်ဂျာတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤနည်း Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်သူတို့ရဲ့ spendable ချိန်ခွင်လျှာတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ နယူးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသုံးစွဲလျက်ရှိ Bitcoin အမှန်တကယ်သုံးစွဲသူများကပိုင်ဆိုင်သည်ဟုသေချာစေရန်အတည်ပြုပေးနိုင်ပါသည်။ သမာဓိနှင့် blockchain ၏အချိန်နဲ့တပြေးညီအလို့ငှာလုံခြုံဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ Bitcoin အသုံးပြုသူများအများ၏ privacy ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အလို့ငှာ cryptography ကိုအတူပြဌာန်းထားပါသည်။
Bitcoin အရောင်းအ Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်အကြားတန်ဖိုးလွှဲပြောင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအရောင်းအပု blockchain တှငျမှတျတမျးတငျထားသနေကြသည်။ ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ဦးကိုခေါ်အချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအပိုင်းအစစောင့်ရှောက် Bitcoin private key ကို သို့မဟုတ်အမြိုးအနှယျ။ ဒီ data အရောင်းအလက်မှတ်ထိုးရန်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်မှာလက်မှတ်သူတို့ကသင့်လျော်သည့် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်၏ပိုင်ရှင်အနေဖြင့်လာကြပြီသင်္ချာအထောက်အထားအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အဆိုပါ လက်မှတ် ဒါ့အပြင်သူကထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်တစ်ချိန်ကဘယ်သူ့ကိုမှအားဖြင့်ပြောင်းလဲလျက်ရှိထံမှငွေပေးငွေယူကာကွယ်တားဆီးဖို့အသုံးပြုသည်။ တစ်ဦး Bitcoin ငွေပေးငွေယူအောက်ပါအတည်ပြုချက်ကာလသည်အလွန်တိုတောင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအရောင်းအအသုံးပြုသူများအကြားထုတ်လွှင့်နေကြသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အကြောင်းကို 10 မိနစ်အတွင်း၎င်းတို့ကိုအတည်ပြုကွန်ယက်။
Bitcoin Buy လုပ်နည်း
Bitcoin ဝယ်ယူမယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူသည်။ Bitcoin ကိုဝယ်နိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူများရိုးရှင်းစွာသူတို့တစ်တွေ Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်အဖြစ်အသုံးပြုနေသည်သော app ကိုပေါ်ဝယ် button ကို click လုပ်ပါ။ re-ရိုက်ထည့်ပေးချေမှုသတင်းအချက်အလက်မှမလိုအပ်လည်းမရှိဒါကြောင့်အသုံးပြုသူရဲ့ဘဏ်အကောင့်ရှိပြီးသား App ကိုချိတ်ဆက်နေသည်။ အသုံးပြုသူထို့နောက်သူတို့ဝယ်ယူချင်ပါတယ်သောငွေပမာဏကိုဝင်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အသုံးပြုသူကလစ်ဝယ်ဖို့နှင့်ငွေပေးငွေယူပြီးစီးခဲ့သည်။ ထိုသို့ရိုးရှင်းပါသည်။
ကျနော်တို့ထိုသို့သော Bitcoin အဘို့အစဉ်အလာငွေသားကုန်သွယ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်တစ်ဦး Bitcoin ဆုပ်ကိုင်ထားမှုကိုနိုင်ပါတယ်တဲ့စမတ်ဖုန်း application အဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်, ပဌနာ လဲလှယ်။ ထိုသို့သောပလက်ဖောင်းကလူဒေါ်လာ, ယူရို, ယန်း, etc များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်သည့်အားဖြင့်တစ်ဦးနည်းလမ်းများထောက်ပံ့
ငွေပေးချေရန်အ Coinbase App ကိုအသုံးပြုပါသို့မဟုတ် Paid Get
Bitcoin ထိုကဲ့သို့သော Coinbase အဖြစ်တစ်ဦး Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ် အသုံးပြု. ကိုဖန်ဆင်းသို့မဟုတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အလွယ်တကူငွေပေးချေမှုအောင်တဲ့အတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ အဆိုပါ Coinbase app ကိုတွင်, Bitcoin နှင့်အတူတစ်ဦးငွေပေးချေမှုစေရန်အီလက်ထရောနစ်ကုဒ် generate ဖို့အသုံးပြုနိုင်သည့်တစ်ဦး QR ကုဒ်ကိုအိုင်ကွန်လည်းမရှိ။ အဆိုပါရည်ရွယ်လက်ခံရရှိသူအိုင်ကွန်နှင့် QR ကုဒ်ကိုပြသနေသည်ကိုထိ။ အသုံးပြုသူထို့နောက်ငွေပေးချေရာတွင်တဦးကိုအတူစာသားကိုမှတဆင့် QR ကုဒ်ကို, ဇာတ်ကောင်များ၏ဆက်စပ် string ကိုသို့မဟုတ်ဆက်စပ်နေသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုမျှဝေနိုင်ပါသည်။
Coinbase အသုံးပြုခြင်း Bitcoin နှင့်အတူ Paid Get လုပ်နည်း
paid တဲ့လွယ်ကူပါတယ်။ ဤရွေ့ကား, ဤအရေးအသား၏အဖြစ်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်ကြသည်။ app ကိုဒီအရေးအသားကတည်းကပြောင်းလဲသွားပြီဆိုလျှင်, ညွှန်ကြားချက်အချို့ကွဲပြားလိမ့်မည်။
အဆိုပါ Coinbase app ရဲ့အောက်ခြေဘက် "Accounts ကို" icon လေးကို Select လုပ်ပါ
အဆိုပါ Bitcoin (BTC) ပိုက်ဆံအိတ်ရွေးချယ်ပါ။
app ကို၏အပေါ်ညာဘက်ထောင့်ရှိ QR ကုဒ်ကိုအိုင်ကွန်ကိုရွေးပါ။
"Show ကိုလိပ်စာ" ကိုရွေးချယ်ပါ
ရိုးရှင်းစွာစာသားသို့မဟုတ်အီးမေးလ်သို့သင့်ရဲ့ Bitcoin လိပ်စာ paste ပြီးတော့နိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ Bitcoin လိပ်စာသို့မဟုတ် "Copy ကူး address 'စာပို့သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပေးပို့ဖို့" Share "ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်ပေးဆောင်တနှင့်သင်၏ Bitcoin လိပ်စာ shared ပါပြီပြီးတာနဲ့သူသို့မဟုတ်သူမအောက်က "ဘယ်လိုတစ်စုံတစ်ဦးကငွေပေးချေဖို့ ... " ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
Coinbase သုံးပြီး Bitcoin နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ဦးကငွေပေးချေရန်ကဘယ်လို
တစ်စုံတစ်ဦးမှတစ်ဦး Bitcoin ပေးချေမှုစေရန်အလို့ငှာ, အသုံးပြုသူသောပေးချေမှုရရှိသူစာသားကိုတောင်းဆိုရန်သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ Bitcoin အကောင့်အရေအတွက်ကအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်။
ငွေပေးချေမှုအောင်တထို့နောက် app ရဲ့အောက်ခြေဘက်အကောင့်အိုင်ကွန်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ်။
တ Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ် (သို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာငွေကြေး) ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထိုအခါ Coinbase app ရဲ့အထက်လက်ျာလက်ကိုထောင့် icon တစ်ခုမထိ။
အောက်ပါစာမျက်နှာတွင် Coinbase app ကိုစအကောင့်နံပါတ်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်အီးမေးလ်လိပ်စာကို copy နဲ့ paste ။ သင့်လျော်သောငွေပေးချေမှုမှတ်စုရိုက်ထည့်ပါ။
ဒါဟာသမားရိုးကျငွေကြေးကျော်မြောက်မြားစွာအကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အသုံးပြုသူများကိုထောက်ပံ့ပေးနေသောကြောင့် Bitcoin ဒီတော့ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာနေသည်။ တဦးတည်း, သင်ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဝယ်ယူမှုစေရန် Bitcoin ကိုသုံးနိုင်သည်။ အခြားအဘို့, Bitcoin အသုံးပြုမှုအတွက်မဆို ID ကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအတော်လေးအမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးသူကလူများအတွက်တစ်ဦးစံပြငွေကြေးစေသည်။ ဒါဟာအစ privacy ကို-သတိသို့မဟုတ်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူဒေသများတွင်နေထိုင်သောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။
Bitcoin software ကိုအလွန်အမင်း encrypt လုပ်ထားသည်။ ရလဒ်အဖြစ် hacked ခံ Bitcoin ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအလွန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Bitcoin ၏အပိုင်ထဲမှာလူတစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်အကောင့်စကားဝှက်တွေနဲ့စိုးရိမ်ခြင်းမရှိသောအခါဟက်ကာများ၏နီးပါးအားလုံးကိုအမှုပေါင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပါပြီ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးစကားဝှက်ကိုကာကွယ်ထားသည်အဖြစ်, Bitcoin သမားရိုးကျငွေကြေးထက်သိသိသာသာပိုပြီးလုံခြုံရေးပေးထားပါတယ်။
သူတို့ကိုစကားဝှက်မပါဘဲ Bitcoin ခိုးယူဖို့အတှကျပါလိမ့်မယ်ထက်ဒါဟာနေအိမ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ငွေခိုးယူဖို့တစ်အိမ်ထဲမှာသူခိုးဘို့ဝေးပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ Bitcoin ၏ဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူမှတ်တမ်းတင်သော log ကိုထုတ်ဖော်ဘူးပေါ့နော်။ Bitcoin အသုံးပြုသူများကိုသာပိုက်ဆံအိတ်၏ ID ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ ဤသည်ကိုလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူမှုများနှင့်ရောင်းချမှုအောင်စဉ်အသုံးပြုသူများသည်တင်းကျပ်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Bitcoin ၏အသုံးပြုမှုကိုဿုံဥပဒေရေးရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာငွေသားနှင့်အကြွေးကဒ်များကိုအသုံးပြုကြသည်တူညီသောလမ်းအတွက်ဥပဒေရေးရာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအပေါငျးတို့သထုံးစံများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Bitcoin borderless ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုရန်မပါခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်တိုင်းပြည်များကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မထားပါ။ အဲဒီကိုပြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးချင်းမဆိုပမာဏ၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာပိတ်ဆို့သို့မဟုတ်အေးခဲနိုင်သောကြောင့်ငွေကြေးဆင်ဆာခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ငွေကြေးမဆိုအထူးသဖြင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မှချည်ထားသောမဟုတ်သည်ကို ထောက်. နိုင်ငံတကာငွေပေးချေမှုကိုလည်း Bitcoin နှင့်အတူလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
ဒီရလဒ်အနေနဲ့ငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းအခကြေးငွေကိုလည်းဖယ်ရှားပစ်နေကြသည်။ Bitcoin အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းထိုကဲ့သို့သောခရက်ဒစ်ကဒ်အခကြေးငွေအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးအရောင်းအနှင့်အတူဘုံများမှာသောအခြားအဖိုးအခ, ရှင်းလင်းစေပါတယ်။ အချို့လူများကတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် Bitcoin ကိုဝယ်ကြလော့။ သူတို့ဟာ Bitcoin နှစ်ပေါင်းများစွာတန်ဖိုးကိုတိုးပွါးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဒါလုပ်ပါ။ အဘိုးပြတ်ဆက်လက်သောငွေကြေးရဲ့မကြာသေးခင်ကသမိုင်းမပြသဖွယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့် Bitcoin သို့မဟုတ်မ may တစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ထဲမှာတုန်လှုပ်စေသောကြီးထွားမြင်ကြပြီသော်လည်း, အဲဒါကိုအနာဂတ်၌ဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်ဟုအာမခံချက်မပေးပါ။
ငွေကြေးထင်ကြေးအလွန်ခန့်မှန်းရခက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် Bitcoin ၏အဘိုးပြတ်အပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များသမားရိုးကျငွေကြေးအပေါ်ခန့်မှန်းပြောဆိုချက်များထက်မကွဲပြားခြားနားသည်။ ရိုးရှင်းစွာအထား, Bitcoin သောအရာတို့ကိုဝယ်ယူတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်ခဲ့ကြသည်ထက်ပိုမိုပေးဆောင်ဖို့ဆန္ဒရှိသူသည်တလျှောက်လာလျှင်တက်တတ်အဆိုပါနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Bitcoin ၏အဓိကအားသာချက်က၎င်း၏တန်ဖိုးကိုတစ်ဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ်မဟုတ်တည်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ထောက်ပံ့သော privacy ကိုပါ။ Bitcoin အသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏အမည်များမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်မလိုပါသောကြောင့်, အရောင်းအအတော်လေးအမည်မသိရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ Bitcoin ပုံနှိပ်သို့မဟုတ်ယုတျညံ့မရနိုင်ပါ။ သာ 21 သန်း Bitcoin အစဉ်အဆက်တည်ရှိပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာအဘယ်သူမျှမသိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်နှင့်မဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကာသကိုတက်ယူကြပါဘူး။ ရလဒ်အဖြစ် Bitcoin ကောင်းစွာသစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးဖြစ်သက်သေပြလိမ့်မည်။
Bitcoin ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်ကမ်းလွန်ရေနံဥပဒေရေးရာယာဉ်များဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလျှော့ချမည်မဟုတ်။ တကယ်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်သည်။ ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုအမှန်တကယ် Bitcoin အသုံးပြု. ရရှိ privacy နဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
ဒါဟာတစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖို့ Bitcoin နှင့်ဆက်စပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အကောင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့် Bitcoin ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်ရရှိသည့် privacy ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက Bitcoin နှင့်၎င်းတို့၏ပိုင်ရှင်အကြားခြားနားထားတဲ့အပိုအလွှာဖန်တီးပေးပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ကဒီ technique ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုများအတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ Bitcoin များအတွက်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုအနေနဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောနေးဗစ်, ဘေလီဇ်နှင့်ကွတ်ကျွန်းစုအဖြစ်နိုင်ငံများတွင်သူတို့ပြည်တွင်းတရားစီရင်ပိုင်မှဘာသာရပ်မဟုတ်သောကြောင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည် Bitcoin များအတွက်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုပေး။ စီရင် US မှာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဆန့်ကျင်ထားလျှင်ရလဒ်အဖြစ်, ထိုလူတစ်ဦးရဲ့အကြွေးတစ်ခုကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အကောင့်တစ်ခုတှငျကငျြးပခဲ့ Bitcoin ၏ဖမ်းဆီးမိန့်ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦး Bitcoin အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကချင်ပါတယ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်? သင်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတူစကားလက်ဆုံရှိသည်ဖို့ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိနံပါတ်များသို့မဟုတ်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပုံစံအသုံးချနိုင်ပါတယ်။